Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » IATA oo magacawday madaxa dhaqaalaha ee cusub
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
IATA oo magacawday madaxa dhaqaalaha ee cusub.
Marie Owens Thomsen waxay ku biiri doontaa IATA oo ah madaxa dhaqaalaha ee dhaqangal 4ta Janaayo 2022.
Owens Thomsen waxay ka iman doontaa Banque Lombard Odier, halkaas oo ay ka soo noqotay Madaxa Isbeddellada Caalamiga ah iyo Joogitaanka.
Owens Thomsen waxa uu shahaadada PhD ka qaatay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah Machadka Qalinjabinta ee Geneva iyo MBA u dhiganta Jaamacadda Göteborg ee Dhaqaalaha iyo Ganacsiga Caalamiga ah.
Iyada oo haysata dhalashooyinka US, UK iyo Swiss, waxay ka soo shaqeysay UK, France iyo Switzerland waxayna si fiican ugu hadashaa af Iswiidhish, Ingiriisi iyo Faransiis.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA)) ayaa ku dhawaaqday in Marie Owens Thomsen ay ku biiri doonto Ururka iyada oo ah Dhaqaale-yahanka ugu sareeya ee dhaqangal 4 Janaayo 2022.
Owens Thomsen waxay ka iman doontaa Banque Lombard Odier, halkaas oo ay u adeegtay Madaxa Isbeddellada Caalamiga ah iyo Joogitaanka tan iyo 2020. Taas ka hor waxay ahayd madaxa muddada dheer ee madaxa caalamiga ah ee sirdoonka maalgashiga (2011-2020) ee Maareynta Wealth Indosuez. Intaa waxaa dheer, waxay ka soo shaqeysay Madaxa Dhaqaalaha iyo doorarka la xiriira Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort Benson iyo HSBC. Xirfadeeda kala duwan waxa kale oo ka mid ah ganacsi-abuurka iyo hawlaha horumarinta suuqa.
"Shaqada Marie ee arrimaha dhaqaalaha guud iyadoo diiradda saareysa sii jiritaankeeda waxay u diyaarin doontaa inay wax ka qabato arrimaha ugu sarreeya ee duulista - kuwaas oo ka soo kabanaya COVID-19 iyo sii jiritaan. Iyada oo ka imanaysa meel ka baxsan qaybta duulista, waxay keeni doontaa aragtiyo iyo aragtiyo cusub oo qiimo leh. Waxaan ku kalsoonahay in ay sii wadi doonto sumcadda IATA ee warbixinta iyo falanqaynta dhabta ah ee lagama maarmaanka u ah sharraxaadda ka qaybgalka duulimaadyada ee dhaqaalaha adduunka iyo u doodista booliska shirkadaha diyaaradaha waxay u baahan yihiin inay guuleystaan, "ayuu yidhi. Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
“Waan ku biirayaa IATA si ay gacan uga gaystaan ​​qaybta duulista oo muddo dheer horseed u ahayd kobaca dhaqaalaha. Tan waxaan ku samayn doonaa hab cilmi-baadhiseed oo tilmaamaya arrimaha sababa arrimaha muhiimka ah iyo xalalkooda mudnaanta sare leh. Tani waa muhiim maadaama duullimaadyadu ay ka soo kabsanayaan COVID-19 oo ay sii wadaan safarka ay ku tagayaan qiiqa eber ah. Waxaan rajeynayaa mustaqbalka halkaas oo duullimaadyadu ay ku kobci karaan dhaqaale waara oo caalami ah, ayuu yidhi Owens Thomsen.
Owens Thomsen waxa uu shahaadada PhD ka qaatay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah Machadka Qalinjabinta ee Geneva iyo MBA u dhiganta Jaamacadda Göteborg ee Dhaqaalaha iyo Ganacsiga Caalamiga ah. Iyada oo haysata dhalashooyinka US, UK iyo Swiss, waxay ka soo shaqeysay UK, France iyo Switzerland waxayna si fiican ugu hadashaa af Iswiidhish, Ingiriisi iyo Faransiis.
Owens Thomsen waxa uu bedelay Brian Pearce oo ka fadhiistay IATA horraantii sanadkan ka dib markii uu ahaa madaxa dhaqaalaha ilaa 2004.